Indlu engasese kunye nepholileyo kwi-Trend
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMette Marie
I-cottage engasese kunye ne-cosy - ifanele ngokugqibeleleyo ukuphumla ngokupheleleyo. Iindawo ezinkulu ezingaphuhliswanga kumacala omabini endlu. Ifestile entsha yegable enkulu enembono yeentaka, i-squirrels kunye nomdlalo wemibala yemithi. Iiterraces zombini ukuya empuma nasentshona. Umzuzu we-10 uhamba ngendlela kunye nendlela engcolileyo eya elwandle. Indawo ezolileyo enendalo macala onke. Ingca ethandekayo enendawo yazo zombini iimoto, imidlalo yebhola kunye nokutshiswa lilanga. Unokukhetha iitumato, i-raspberries kunye ne-rosehips ngexesha lonyaka.
Amagumbi amabini alula anenduduzo enhle kubantu abane bebonke. Enye ineebhedi ezimbini ezingatshatanga, enye inebhedi yesofa ephindwe kabini (ububanzi obuyi-140 cm, ubude be-188 cm). Ukongeza, ukubakho kweebhedi ezongezelelweyo ezimbini kwigumbi lokuhlala - enye kwi-sofa, enye kumatrasi phantsi.
Ukuhamba umgama ukuya kwinkampu (iTrend Camping) kunye nevenkile encinci kunye nokwenzeka kokuhlamba impahla. Imizuzu emi-5 ngemoto ukuya kwivenkile enkulu eOverlade. Imizuzu eli-10 ngemoto ukuya kwidolophu yaseRønbjerg enevenkile yeentlanzi, iziko leeholide kunye neendawo zokutyela.
E-Rønbjerg, isikhitshana siyanduluka sisiya kwisiqithi saseLivø. ULivø unokuhambahamba ngosuku olunye. Inolwandle oluthandekayo kunye nendalo eyahlukeneyo emangalisayo.
Kukho ivenkile yokutya kunye necafe esiqithini engavumelekanga ukuba iimoto kunye nezinja.
Iziko le-Ertebølle Stone Age yimizuzu esi-7 ukuya emazantsi. Unokuhamba apho ngeyure enye, okokuqala ecaleni kwendlela yelizwe kwaye emva koko ngeendlela ezincinci ezisehlathini.
Iziko le-Ertebølle Stone Age ngamava amnandi. Ngo-2019, yavulwa ngemiboniso emitsha yangaphandle, ehlala yenziwa bukhoma.
Encotsheni yethambeka lolwandle e-Ertebølle kukho umbono omhle ngenene.
Kukho iincwadana ezinemifanekiso ezithetha ngoLivø no-Ertebølle kwindlu encinane.
Kufuphi neAalborg, Lille Vildmose kunye neSvinkløv, iPaki yeSizwe eTh
Umbuki zindwendwe ngu- Mette Marie
Unendlu yakho yonke ngexesha lokuhlala kwakho.
UMette Marie yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Løgstør